Ciidanka NISA oo caawa nin Sarkaal ahaa ku dilay Daljirka Dahsoon | Dhacdo
Ciidanka NISA oo caawa nin Sarkaal ahaa ku dilay Daljirka Dahsoon
Xoogaga Waran ee ka tirsan Ciidanka Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA) ayaa caweyskii caawa waxay Sarkaal ka tirsanaa Ciidamada Booliska ku dileen Taalada Daljirka Dahsoon ee Magaalada Muqdisho.
Abkoow Cambuure oo watay gaari boolis ayay Ciidanka Waran ku dileen Taalada Daljirka Dahsoon, xilli uu ka yimid dhanka Dalcadda Degmada Boondheere.
Sarkaal ka tirsan Booliska Gobolka Banaadir ayaa Dhacdo.com u xaqiijiyay in Abkoow Cambuure uu ku baxay gacanta Xoogaga Waran.
“Maqribkii ayaa waxaan wada fadhinay maqaaxida Banooda ee ku taala ka soo horjeedka Hotel Maa’ida (Ex Naasa Hablood 2), isagoo wata gaari boolis ayuu naga tagay. Laba saac ka dib qiyaastii isagoo gaarigiisa wata ayuu ka soo degay Dalcadda Degmada Boondheere. Ciidanka Waran ee ka tirsan Hay’adda Nabad Suggida ayaa ku dilay Taalada Daljirka Dahsoon.” Ayuu yiri Sarkaalkan oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan.
Sarkaalkan ayaa ku waramaya inaanan aqoon sababta uu askari ka tirsan Ciidanka Waran uu u dilay marxuumka, inkastoo ay soo baxayan warar sheegaya in rasaasta kaga fakatay.
“Illaa hadda cid sheegi karto malahan sababta loo Abkoow Cambuure, askarta qaar waxay leeyihiin askari ayay xabad uga fakatay. Koley marka baaritaan la sameeyo ayaa la kala ogaan karaa sababtuu ku dilay.”
Allaha u naxariistee Abkoow Cambuure ayaa si dhow ula soo shaqeeyay Gudoomiyihii hore ee Maamulka Gobolka Banaadir ahaana Duqii Magaalada Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yariisow).
Laamaha ammaanka ayaan ka hadlin tallaabada lagu dilay Sarkaalkaasi, waxaana xusid mudan inaanan la soo xirin askarigaasi, oo welina uu ku sugan yahay Daljirka Dahsoon.
Ciidanka Waran oo ka amar qaata Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa loo adeegsadaa hawlgalada gaarka ah.